"Tompoko, inona no mety hataoko, mba hovonjena aho? ... Minoa an'i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao." Asan'ny Apostoly 16:30, 31
"Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena." Asan'ny Apostoly 4:12
Mihevitra angamba ianao fa rehefa tsy manisy ratsy olona, rehefa miezaka hitondra tena tsara, rehefa mikatsaka ny hanao soa eo amin'ny manodidina anao, dia mahafeno izay takian'Andriamanitra. Ho an'ireo fahadisoana tsy hay nosorohina, dia manantena ny famindrampony ianao. Izany dia fihevitrao na fivavahanao manokana, ary amin'izany, dia ianao ihany no mamaritra izay hoe azon'Andriamanitra ekena. Tsy misy maharatsy ireo fikasana tsara ireo, saingy tsy ampy izany, satria masina Andriamanitra ka tsy mahazaka ny ratsy. Soa ihany fa Izy koa no Ilay Andriamanitra Mpamonjy, Izay nandravona ny zava-drehetra, tamin'ny alalan'ny sorona nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana.
Vao tany am-piandohan'ny tantaran'ny zanak'olombelona, dia efa hitan'Andriamanitra fa "ny fisainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany" (Genesisy 8:21). Hoy Izy taty; aoriana: "Samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra" (Romana 3:23). Tsy mahay manatsara samirery ny tenany ny olombelona. Mambole hazo poara dia, ary karakarao tsara araka izay azo atao ilay izy; nefa dia tsy ho tsara ny poara homeny. Tsy maintsy atao grefy izy, izany hoe tsy maintsy anatsofohan'ny mpamboly sampana karazany hafa eo aminy.
Toy izany koa ny olombelona. Hoy Jesosy: "Tsy maintsy hateraka indray ianareo" (Jaona 3:7). "Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra" (1 Jaona 5:1).
"Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny Zanany izany fiainana izany. Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana" (1 Jaona 5:11-12). Inona indray no ho azoko anampiana izany?